Izinto eziyi-8 okufanele uzicabangele lapho ukhetha i-alamu yokulwa nokweba
1. isilinganiso sokuthola isilinganiso sokutholwa sisho isilinganiso sokutholwa okufanayo kwamathegi angenazimpawu kuzona zonke izinkomba endaweni yokuqapha. Kuyinkomba yokusebenza enhle ukukala ukuthi ngabe uhlelo lwe-alamu esitolo elwa nokweba lunokwethenjelwa yini. Izinga lokutholwa eliphansi kaningi lisho ukuthi amanga aphezulu ...
I-alamu yokulwa nokweba esitolo sezimpahla ibikwe kabi futhi yathathwa njengesela lezimpahla
Sivame ukuvakashela izinxanxathela zezitolo, futhi iminyango yezingubo zokulwa nokweba ingabonakala emnyango wenxanxathela yezitolo. Lapho izimpahla ezinamabhakede alwa nokweba zidlula kule divayisi, i-alamu yezingubo izokhipha umsindo. Kukhona nabantu abenze inkinga ngenxa yalolu hlobo lwe-alamu. Okwe-exa ...
Izimiso eziyisisekelo zempahla ye-EAS nezinkomba zokusebenza eziyisishiyagalombili
I-EAS (Electronic Article Surveillance), eyaziwa nangokuthi uhlelo lokuvikela ukuntshontshwa kwempahla kagesi, ingesinye sezinyathelo ezisetshenziswa kakhulu kwezokuphepha kwempahla embonini enkulu yokuthengisa. I-EAS yethulwe e-United States maphakathi nawo-1960, ekuqaleni yayisetshenziswa embonini yezingubo, yandile ...
Izixazululo zohlelo lokuphepha kwezingubo
Ⅰ Isimo Samanje Sokuphepha Esitolo Sezingubo Kusuka ekuhlaziyweni kwemodi yokuphatha: izitolo ngokuvamile azinalo ideski losizo, amakhabethe wokugcina, wemodi yokuzikhethela. Lokhu ngeke kulawule izinto zekhasimende. Njengezikhwama zesikhumba, okokugqoka, izicathulo nezigqoko, kuzokwebiwa. Kokunye ...
Uyemukelwa ukuhambela i-15th International Internet of Things Exhibition
Lo mbukiso uzoba ngo-Ephreli 21 eShanghai World Expo Exhibition & Convention Center, i-IOT isho ukuthi 'I-Internet Yezinto', iyisizukulwane esilandelayo se-Internet of Things Explorer yesikhulumi esinobumfihlo, esivikelekile, esivumelana, esheshayo futhi esinamandla sokuqina kokuzijwayeza okusha Izicelo ze-IOT ...
Kuyini i-EAS? Idlala kanjani indima yokuvikela? Lapho uthumela enxanxatheleni yezitolo enkulu, wake wahlangabezana nesimo lapho umnyango ungena emnyango? Ku-wikipedia, ithi i-Electronic article
Kungani ungeke untshontshe Imishini Ekhipha Unmanned Vending?
Kungani ungeke untshontshe Imishini Ekhipha Unmanned Vending? Wake wayisebenzisa imishini yokuthengisa engenamuntu? Uma kuqhathaniswa nemishini yokuqala yokuthengisa engenamuntu, ngeke kusaba namahloni okuthi "...
Ubuchwepheshe be-RFID obuvumela ukuphathwa kwezingxenye zezimoto
Ubuchwepheshe be-RFID obunika amandla ukuphathwa kwezingxenye zezimoto Ngokukhuphuka kwesidingo eminothweni esathuthukayo kanye nokugqugquzela nokwenziwa kwezimoto zamandla amasha, amandla okukhiqiza izimoto emhlabeni jikelele ayanda njalo ...
Phula ubuhlakani bokuthengisa, kufanele amabhizinisi ayibambe kanjani i-expression entsha yokuthengisa?
Phula ubuhlakani bokuthengisa, kufanele amabhizinisi ayibambe kanjani i-expression entsha yokuthengisa? Ngaphambi kokuthi iChina ingene esigabeni esisha se-zero Wei, ibivele ibone ukuzalwa komkhakha wendabuko wokuthengisa, ukwakhiwa komthengi noma ...
Amacala Aminingana E-Etagtron Solution
Amacala amaningana e-Etagtron Solution Tommy Hilfiger athumela isisombululo sesampula se-Etagtron RFID esisetshenzisiwe uTommy Hilfiger, njengomunye wemikhiqizo ye-premium yomhlaba, unikela ngesitayela sokuqala, ikhwalithi kanye nenani kumakhasimende womhlaba wonke ....